Famolavolana tranonkala: Tsy momba anao | Martech Zone
Handeha hanova endrika tranokala lehibe ve ianao? Ahoana ny fananganana an'io rindranasa rindrambaiko clunky-but-kritika io? Alohan'ny hirobokao dia tadidio fa ny arbiter farany amin'ny kalitao dia tsy ianao fa mpampiasa anao. Ireto misy dingana vitsivitsy hahalalana bebe kokoa ny filan'izy ireo sy ny fitondrantenany alohan'ny handanianao ny dolara fandefasana sarobidy:
Ataovy ny fikarohana ataon'ny mpampiasa anao
Atombohy amin'ny angona angovo azo ampiasaina, toy ny Analytics, fa efa tokony ho hitanao izay ataon'ny mpampiasa anao (na tsy) ataony. Ho fampahalalana fanampiny, azonao atao ny manandrana ny mpampiasa ny tranokala na rindrambaiko amin'izao fotoana izao hahitanao maso manokana izay mahafinaritra sy izay mahasosotra ireo mpampiasa anao. Miresaka amin'ireo mpiara-miasa aminao amin'ny varotra na serivisy ho an'ny mpanjifa hianaranao ny olan'ny mpampiasa ankehitriny sy maharitra. Na dia efa misy ao anaty tatitra any ho any aza ity angona fikarohana ity dia manaova fotoana hiresahana. Ny fiaraha-miory dia nipoitra avy amin'ny resaka nifanaovana tamin'ny olona ao anaty hady dia ho fampitaovana voajanahary anao hanao fanapahan-kevitra momba ny famolavolana sy ny fampandrosoana.
Raha ny marina dia ataovy izany prototypes (plural)? tsy misy mamorona prototype tonga lafatra amin'ny andrana voalohany. Fa izany no hevitra: ny tsy mahomby haingana, mora vidy, ary arak'izay azo atao amin'ny fahafantarana fa ny iteration tsirairay dia mahatonga anao hanakaiky kokoa ny vahaolana mendrika hananganana. Azo antoka fa afaka manangana prototypes mahomby amin'ny HTML na Flash ianao, fa ny Acrobat, Powerpoint, ary na ny taratasy sy ny pensilihazo aza dia fitaovana tena tsara hampiasana ny hevitrao amin'ny endrika azo tsapain-tanana. Amin'izany dia azonao atao ny mifampiresaka, manombatombana ary mizaha toetra ny hevitrao. Miresaka fitsapana?
Rehefa mieritreritra ny fitsapana ny mpampiasa ny sasany dia mieritreritra akanjo palitao fotsy sy clipboard izy ireo. Mampalahelo fa maro ihany koa no mieritreritra fanemorana sy fandaniana fanampiny. Rehefa voatery misafidy an'io ary tsy misy fanandramana ataon'ny mpampiasa mihitsy dia safidio ny ankamaroany avy eo. Ho henatra! Amin'ny tetik'asa kely kokoa na ireo izay manana fe-potoana faran'izay ratsy dia mankanesa amin'ny fomba fiady anaty akata: mitadiava mpiara-miasa 6 hatramin'ny 10, ray aman-dreny, vady, mpifanolo-bodirindrina (na iza na iza vonona hanampy) ary mandinika azy ireo tsirairay rehefa mahavita ny iray na roa amin'ireo lahasa lehibe indrindra izy ireo amin'ny prototype-nao. Tsy hanome anao ny tatitra rehetra momba ny fahitana na faniriana tsara izay omen'ny fanandramana fampiasa amin'ny fomba ofisialy izany, fa ny fitsapana na dia olona iray fotsiny aza dia 100% tsara kokoa noho ny fitsapana olona. Ny valiny dia mety hahagaga anao na hahasosotra anao mihitsy aza, fa tsara kokoa ny mahafantatra ireo zavatra ireo dieny izao toy izay aorian'ny tetik'asa vita.
Ny endrika mety
Marina fa tia zavatra mamirapiratra sy tsara tarehy isika olombelona. Amin'ny teknolojia, ny interface tsara namboarina dia heverina ho mora ampiasaina kokoa noho ireo tsy noforonina. Tsy midika izany fa tokony ho fifaninanana hatsaran-tarehy ny tetikasanao. Ohatra, alaivo an-tsaina ange raha toa ka nampiasa sary be dia be ny famolavolana efijery an'i Google sy ny fiovan'ny efijery. Na dia mety manintona amin'ny sehatra hafa aza ity dia hanelingelina tanteraka amin'ny efijery fikarohana. Ho an'i Google, ary maro hafa, ny betsaka indrindra tsara tarehy ny famolavolana efijery matetika no tsotra indrindra.
Fantatsika tsara ny fanerena amin'ny tetikasa vaovao iray haingana mandeha miasa fananganana zavatra. Mampalahelo raha ny dingana toy ny fikarohana ataon'ny mpampiasa, ny prototyping ary ny fitsapana ny mpampiasa no zavatra voalohany tokony hatao rehefa mihamafy ny teti-bola sy ny tetiandro. Ny mahatsikaiky dia ireo matetika afa-tsy ny fotoana sy ny vola any aoriana any, ary amin'ny farany dia manakana anao tsy hanangana tsy nahy tamina kinova tsara kokoa ho an'ny tsy mandeha.
Tags: famolavolanauser experiencefamolavolana interface tsara ho an'ny mpampiasauxMalagasy famolavolana
Ny renin'ny data rehetra
23 Jul 2009 amin'ny 9:41 PM
23 Jul 2009 amin'ny 10:35 PM
Tsy Dougy! Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ny sakaizantsika Jon Arnold avy ao amin'ny Tuitive - maso ivoho mahafinaritra eto an-tanàna izay manampahaizana manokana amin'ny fananganana endrika tranonkala tsy mampino izay mampitombo ny traikefan'ny mpampiasa.
24 Jul 2009 amin'ny 2:54 PM
Tsy tokony ho sarotra loatra izany mba hivadika plugin.
24 Jul 2009 amin'ny 3:16 PM
Efa miasa eo io, Dave! :) Nalefa tao amin'ny BlackBerry Verizon Wireless ahy